Semalt: Ny manan-danja hamongorana ny adiresy IP rehetra
Ny toetra maha-olombelona dia diso. Izany no mahatonga ny zava-misy fa ny zavatra sasany dia mila atao haingana kokoa fa tsy taty aoriana, mbola misintaka izy ireo. Amin'ny teny hafa, ny fangatahana dia mandresy foana - affresco tipo trompe l oeil con porta su parco. Raha tsy ekena ny adiresy IP rehetra rehetra dia zava-dehibe indrindra indrindra rehefa mifandray amin'ny blôgy iray na tranokala. Raha te hanamboatra rafitra mahomby sy mahomby ianao, dia tsy tokony hohadinoina izany. Na izany aza, misy dingana roa izy io. Voalohany, ity lozam-pifamoivoizana ity dia mamoaka antonta-kevitra lehibe toy ny isa amin'ny fahitana pejy sy ny fotoana laniana amin'ny pejy Internet. Faharoa, mampihena ny taham-pitenenana izany amin'ny fampitomboana ny faharetan'ny mpandefa mpampita (mpampiasa).
Satria ireo mpandrindra tranonkala dia mampiasa io tahiry io ho fanadihadiana sy fanatsarana, dia mila ny tsy hanakana ny adiresy IP ianao. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'izany dia manimba ny fahafahanao misintona fahitana sarobidy - avy amin'ny analytics.
Ity misy torolalana nataon'i Frank Abagnale, Semalt Mpitantana Success Manager, momba ny fomba hanafoanana ny adiresy IP amin'ny Google Analytics.
Dingana voalohany: mamaritra ny adiresy IP
Ity dingana ity dia tsotra, ary Google dia tokony hanampy. Ampidino fotsiny ny adiresy IP misy anao. Ao anatin'ny segondra vitsy dia hiseho ny valiny, ary eo an-tampon'ny valiny dia ho hitanao ny IP.
Dingana roa: miverena amin'ny sivana
Izao no tokony hataonao: 8)
Mandehana any amin'ny Google Analytics ary midira ao amin'ny kaontinao. Rehefa tafiditra ao ianao dia tokony ho afaka hahita ny kaontin'ny kaonty
tsindrio eo amin'ny marika 'Admin' any an-tampony ao amin'ny menus navigation. Ity dia hamindra anao any amin'ny efijery hafa
aorian'ny dingana etsy ambony, dia fidio ilay kaontiny izay nametrahana ny sehatra misy anao
mamantatra sy mifantina ny sehatra (trano) izay tianao hofadiana amin'ny tatitra ataonao momba ny analytics.
misafidiana iray amin'ny tabilao misy marika filtre ary manamboara iray (ampidiro filtre vaovao).
Dingana telo: fampiharana ny sivana
Raha heverinao fa tsy nanao an'ity ianao taloha dia diniho ireto manaraka ireto:
mamorona sivana vaovao ho an'ny profil
dia mieritreritra fa misy tsiambaratelo ary mahatsiaro ny anarana hoe sivana. Andramo zavatra toy ny IP voasakana
mifidy ny sivana efa voafaritra mialoha ary mandehana mankany amin'ny dingana manaraka
manao fanovana ao amin'ny sakafo fanindronana faharoa mba hamakiana ny 'fifamoivoizana amin'ny adiresy IP'.
ao amin'ny adiresy IP raha hitanao izany araka ny asehon'ity lohateny ity.
mamonjy ireo fanovana, ary tsara ny mandeha
Izany dia tsotra. Ankehitriny, rehefa nikarakara an'io ianao, dia afaka mivezivezy amin'ny tranonkalanao ianao nefa tsy tokony hiahiahy momba ny zava-drehetra mampihetsi-po ny tatitra Analytics / data. Ahoana ny momba anao? Ny vidin'ny fampidinana ny adiresy IP avy amin'ny Google Analytics dia tsotra ary tsy mitaky anao ho mpahay teknika. Arabe fotsiny ireo dingana voatanisa, ary vita ianao:
Dingana voalohany - avelao i Google hanampy anao hamantatra ny IP misy anao manokana
Dingana roa - mivezivezy ao amin'ny kaonty ka manangona sivana
Dingana telo - Hanova ny sivana ampiasaina mba hanafoanana ny IP anao ary hamonjena ireo fanovana rehetra.